1974 Husqvarna 400 WR 6-Speed | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11277)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7517)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6459)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (6073)
နေအိမ် → Husqvarna → 1974 Husqvarna 400 WR 6-Speed
14 ဧပြီ 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 1974 Husqvarna 400 WR 6-Speed
ရောင်းမည် – 1974 Husqvarna 400 WR 6-Speed
Sorry baout the Ebay link. ကံမကောင်းသဖြင့်, the image tag option to place same in the message body is broken and onlyasingle image attachment is allowed hence the reference to my detailed auction post.
1974 Husqvarna 400 Wide Ratio –6အရှိန်
This bike has been in my collection for3နှစ်ပေါင်း. I am selling it to finance the purchase ofahighly desirable and rare motorcycle.
ယေဘုယျအား, I give this bikearating of 8 out of 10. It isaracer’s bike and notadisplay machine. The tank is in very, very good condition with onlyasmall dent on the left top.
စျေးနှုန်း: $1650 or best offer.
2006 Husqvarna TC 510 - အသုံးပြုခံ့ 2006 TC 510 ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာ
The new Husqvarna TE 250 R and TE 310 R ကို : SpeedDoctor.net
1971 Husqvarna 400 Cross – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် EURO HUSKY TEAM NEWS: Very important announcement Cafe Husky
2013 Husqvarna Lineup – ဖုန် Rider မဂ္ဂဇင်း
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2013 Husqvarna Lineup – ဖုန် Rider မဂ္ဂဇင်း
17.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Rekluse Core EXP 3.0 Auto Clutch 08-10 Husqvarna TC/TE/TXC 450/510
14.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2008 Husqvarna WR 250 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
13.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2012 Husqvarna CR 125 preview – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
11.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Motorcycle Specifications
Husqvarna Motorcycles – ဝီကီပီးဒီးယား, the free ...
10.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Husqvarna Motorcycles – ဝီကီပီးဒီးယား, အခမဲ့စွယ်စုံကျမ်း
08.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2012 Husqvarna Dual-Purpose TE Line Revealed Rider Magazine
Bajaj Discover ဆူဇူကီး AN 650 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Moto Guzzi 1000 Daytona Injection တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Brammo Enertia Ducati 60 Ducati Desmosedici GP11 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို စမတ် eScooter Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဟွန်ဒါ DN-01 စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Ducati Diavel Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic စက်ဘီး Kawasaki ER-6n KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို